Dabballooti Wayyaanee Ummata Saamsisaa Jiran! | QEERROO
Dabballooti Wayyaanee Ummata Saamsisaa Jiran!
Posted on July 25, 2011 by Qeerroo
(Qeerroo, Amboo, 25 Adoolessa 2011) Godina Shawaa Lixaattii dabballoonni OPDO halkan wal qindeessuun ummataa fi daldaltoota saamaa fi saamsisaa akka jiran ibsame.
Qeerroon akka gabaasettii, namoonni maqaan isaanii Gareen 1ffaa Kabbadaa Qoroo miseensaa fi aangawaa waajjira milishaa Onaa Midaa Qanyii, kan yeroo hedduu sabboontota Oromoo dararaa ture, jalatti ijaaraman halkan dhokatanii ummata saamaa fi saamsisaa jiran.
Ergamtooti OPDo kunneen hattoota kurfeessuun halkan ummata saamaa fi samsiisaa kan turan yammuu ta’u, gochaan isaanii waan isaan irratti beekameef yeroo ammaa kanaa humna poolisaa godina Shawaa Lixaatiin to’atamanii waajjira poolisaa godina Shawaa Lixaatti akka argaman beekameera.
Kana malees, maqaa ABO fi Qeerrootiin kanneen ummata saamaa fi saamsisaa turan keessaa Gareen 2ffaa namaa Tamasgeen Damissee jedhamuu, kan hojjetaa puulii ijaarsaa Onaa midaa Qanyii kan turee fi yeroo hedduu hattoota qindeessuun qonnaan bultootaa fi daldaaltoota saamaa fi saamsiisa kan turee ta’uun beekamee jira.
Saamtonni kunneen kan yeroo dheeraaf dabballoota OPDO ta’anii ummata hiraarsaa jiran kunneen haala kanaan garee uumanii torbee kanaa keessaa Onaa Midaa Qanyii fi Calliyaa Geedoo gidduu fi Onaa Iluu Galaan gidduuttii uummaata saamaa fi saamsisaa otuu jiranii bira gahamee akka ta’atamanis gabaasaan Qeerroo dabalee hubachiisee jira.
Haata’uutii, mootummaan wayyaanee samtoota[hattootaa] kana to’achuu dhiisee sabboontotaa nagaa hidhaa fi dararaa akka ture kan gabaase Qeerroon, ammas maqaaf malee murtiin dhugaa dabballota OPDO kana irratti akka kennamu waanti mirkaneessu akka hin jiirre eeree jira.